Ywar Thar Lay (YTU): 7/1/09
ဒညင်းသီးများ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ပို့ပေးသော ကိုရုပ်ဆိုးနှင့်မဥမ္မာအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းခင်ဗျာ..
Posted by Anonymous at 8:10 AM 30 comments Links to this post
မနှစ်က ဆော်လမွန်းငါးတို့အပြန် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို အမှတ်တရ ရေးမိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် အမိမြေနဲ့ ခွဲခဲ့ရတာ နှစ် နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ 28-07-2007 ရက်နေ့ ည8နာရီကျော်မှာ ဟောဒီမြေကို ခြေစချခဲ့တာ။
လက်ရှိကျနော် ပြန်လည်တွေးတောရင်း အထက်ပါ မေးခွန်းတစ်ခုကို တွေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့ဆီကို ခဏတဖြုတ် စာဖတ်ရုံ ဖတ်တဲ့သူတွေ၊ပုံမှန်ဖတ်တဲ့သူတွေ၊ ကော့မန့်ပေးတတ်တဲ့သူတွေ၊ မျက်စိလည်လမ်းမှား ရောက်လာသူတွေ အားလုံး အားလုံးစီကနေ ဒီမေးခွန်းလေးရဲ့ အဖြေကို လိုချင်မိတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ စကားဝိုင်းလေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးကြပါခင်ဗျာ…………
ကျနော်ဘာကြောင့်ထွက်လာခဲ့သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျနော်အရင်ဖြေပါမယ်။ ဆယ်တန်းအောင်တော့ ရန်ကုန်ကို တက်လာဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်ကိုမသွားခင် အိမ်မှာ နှုတ်ကတိတစ်ခုပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ နိုင်ငံရပ်ခြားကို မသွားပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိ။ ရန်ကုန်ကို လွှတ်ဖို့တောင် မနည်းလေ။ ဟိုးအဝေးးးးးးကြီးဆို ကျနော်တို့ မိသားစုသေးသေးလေးမှာ ခွဲခွာခြင်းဆိုတာ အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲ။ ရေကြည့်လို့မှ လက်တစ်ဖ၀ါးတစ်ဝက်ခွဲရှိတာ။
ကျနော်ရန်ကုန်ရောက်စက Poly ဆိုတာတွေ ခေတ်စားစပြုပြီ။ ကျနော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို Polyနဲ့ ဒီကိုထွက်သွားတာ အဲ့ဒီအချိန်ထဲက ပေါ့။ သင်တန်းထဲက အစ်မကြီးတစ်ချို့တစ်ဝက်လည်း ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာ မစောင့်နိုင်တာနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ ထွက်သွားကြလေရဲ့။ ကတိတစ်ခုကို တည်မှ ကြိုက်တတ်တဲ့ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ကတိအတိုင်း ယောင်လို့တောင် စိတ်မ၀င်စားမိအောင် မျက်စိတွေပိတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ခေါင်းကို ဘယ်နှစ်ခါယမ်းမိမှန်းမသိအောင် ယမ်းရင်း overflow ဖြစ်အောင်ပေါ့။
သင်တန်းတွေတက်ရင်း တက္ကသီလာကိုလည်း တစ်ဖက်တက်ဖြစ်တယ်။ Third year လောက်မှာ NUS ဆိုတာ သိရပြန်တယ်။ ကျောင်းမှာ Presentation လာလုပ်တာမို့ သူရို့ကျောင်းတွေကို အားကျမက်မောခဲ့ရတယ်။ ဟာ libraryကြီး၊ ဟင် ကျောင်းသားတွေအတွက်အဆောင်၊ အလို..သီရေတာကြီးတွေ၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတွေ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့မှ မသက်ဆိုင်ပဲလို့ ခေါင်းငုံ့ပစ်လိုက်တယ်။ တစ်ချို့အတန်းဖော်တွေ NUS ၀င်ခွင့်ဖြေကြတယ်လည်း ကြားမိတယ်။
နောက်တစ်နှစ်တော့ အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းဆက်တက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး Presentation ကို သင်တန်းဖက်က တစ်ခါလာပြန်ပါလေရော။ သိပံ္ပမောင်ဝရဲ့ အောက်စဖို့ အကြောင်းကို သတိရမိပြန်တယ်။ စာထဲမှာပဲကောင်းပါတယ်လေ။ ငါ့အတွက် လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ စိတ်ပြန်သွင်းမိတယ်။
ကျောင်းပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက တက်ကြွစွာ ဟေ့ကောင် ကျောင်းလျှောက် ကျောင်းလျှောက်ဆိုတော့ လျှောက်တာပေါ့လို့ ပြောပြီး လုံးဝမလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူး။ သူငယ်ချင်းက ကျောင်းပါသွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းမှာလည်း စာမတော်တာမို့ ဆက်တက်ဖို့လည်း ရွေးချယ်ကြမှာမှ မဟုတ်ပဲ။ လျှောက်ဖြစ်တော့လည်း မရွေးချယ်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဒါနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်း ဆယ်ယောက်ထဲမှာ တစ်ယောက်ချင်း တစ်ယောက်ချင်း ထွက်သွားလိုက်ကြတာ။ နောက်ဆုံးကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်တော့တယ်။ ဘာလုပ်နေတာလဲ မေးရင် Experience စုနေတယ်လို့ ဖြေမိတယ်။ ဒီအဖြေ မခိုင်လုံဘူးဆိုတာသိပေမယ့် ကျနော်တို့တွေ မသိချင်ယောင်ပဲဆောင်နေကြတာ။
ဒီလိုနဲ့ ချက်ကောင်းမိတဲ့ နေ့ကိုတော့ ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ သူငယ်ချင်းအဖေကလည်း အမေ့ဆရာရင်း။ သူတို့မိသားစုတွေ အလည်အပတ်သွားခဲ့တဲ့ DVD လေးပြရင်း တိုက်တွန်းနေခဲ့တာ။ ဒီမှာ ဘာလုပ်မလဲတဲ့။ ကျနော့လခက နှစ်သိန်းကျော်လောက်ပဲ ရနေခဲ့တာ။ အိမ်ကို လုံလောက်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ လူတန်းစေ့တယ်ဆိုရုံ နေနိုင်တဲ့ ၀န်ထမ်းမိသားစုထက် တစွန်းတစေ့မှ မပိုခဲ့။ နောက်တော့ ဖေက သူအလုပ်က ထွက်ချင်တယ်ဆိုလာတယ်။ စက်ရုံမှာ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက သူ့ကို တော်တော်လေး ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလုံခြုံမှုတွေကြားမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့ သူမနှစ်မြို့တော့ဘူးဆိုပါတော့။
အဲဒီတော့ အိမ်ရဲ့ အဓိက စားဝတ်နေရေးကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အရေးက ကျနော့အရေးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဖေနဲ့ စတင်ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းဖြစ်ပါမယ်လို့။ အခုအချိန်အထိ အိမ်ပိုင်တစ်ခုတောင် မရှိခဲ့သေး။ သူအလုပ်က ထွက်ပြီဆို ဘယ်မှာနေထိုင်မလဲ ဘယ်လိုနေစားကြမလဲ။ အဲဒီမှာပဲ အပြင်ထွက်ဖို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ ဖေနားပြီဆို သားအလှည့်လေ။ ဆိုတော့ ဆိုတော့…
ချက်ချင်းရတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု မို့ အလုပ်ကိုထွက်စာတင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီခရီးကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုမိုင်တိုင် နှစ်နှစ်စာ ကျနော်လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီ။
ကျနော့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကော ဘာအတွက် ဒီခရီးကို လျှောက်ခဲ့တာလဲ ကျနော့ကို ဝေမျှ ဆွေးနွေးပေးကြပါလား ခင်ဗျာ………….
July 28, 2009 1:07 AM
ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့အရှည်ကြီးပဲကိုရွာသားရေ........သူများလိုဆွေမျိုးသဟာဆိုတာလဲမရှိ။ အဆက်အသွယ်ဆိုတာလဲရှားပါးတဲ့ အနေအထား။မိန်းကလေးတွေလာကြတာ ရှားပါးတဲ့အချိန်။ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ မိဘမိသားစုနဲ့ ခွဲခွာခြင်း။အိုးးးးးးးးးးးပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကို အရှည်ကြီး။တစ်ထောင့်တစ်ညလို့တောင်တင်စားနိုင်ရဲ့။ အဲဒိတော့ ဒီကွန့်မန့်လေးမှာတော့ဆွေးနွေးလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမို့ ပို့စ်အကွယ်ကပဲ သူများတွေဆွေးနွေးတာထိုင်ကြည့်ပါရစေတော့။ အရေးအသားလေးတအားညက်တယ်။ စာရေးသားတာတော်တယ်။ ဂွတ်ဒ်အနော့်ဆီလာမလည်ပေမယ့် အနော်ကတော့လာလည်ပြီး ခြေရာတွေချန်ခဲ့ပါတယ်နော် :D)
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပဲ။ မမြင်ရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို ကန့်လန့်ကာ ဟ ပြလိုက်သလိုပဲ။1996 တို့ အိမ်ထောင်ကျလို့ ပထမဆုံး စင်ကာပူထွက်လာတော့ သင့်ဘ၀ မဂ္ဂဇင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေရာက ထွက်ခဲ့ရတာ။ အဲဒီမှာ ဆရာ မောင်သစ်ဆင်းက တို့ကို မှာလိုက်တယ်။ အခု လူငယ်တွေ အများကြီး နိုင်ငံခြားကို ထွက်နေကြတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ Why? မေးခွန်းတခုပဲ မေးရင် ခေတ်ကို ကောင်းကောင်းပုံဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ် တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ Why? က ဦးနှောက်ယိုစီးမှုတွေ၊ လူနေမှုဘ၀တွေ၊ နိုင်ငံရေးတွေ အားလုံးကို ဖော်ပြနေလို့ပါပဲ။
အနော်ဒီရောက်လာတာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့ သူ့ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖော်ပြဖူးတယ်။အဲဒါကိုပဲ သေးသေးလေးဆွေးနွေးခြင်းလို့မှတ်ယူလိုက်ပါ နော် :D
http://khinoomay77.blogspot.com/2009/07/hello-singapore.htmlTuesday, July 28, 2009hello ……Singaporeကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုဘဲ။ ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ သာမာန်ဝန်ထမ်း မျိုးရိုးက လာတဲ့ကိုယ်ဟာ နိုင်ငံခြားဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုဘဲ ဖြစ်ခဲ့မိတယ်။ ကျောင်းတက်တယ် ရိုးရိုးဘဲ။ ကျောင်းပြီးတယ။် ရိုးပါသေးတယ်။ အလုပ်ဝင်တယ်။ ဒါလည်း ရိုးသေးတယ။် အိမ်ထောင်ကျတော့ အဲဒီခောတ်က ခေတ်စားတဲ့သဘောင်္ာသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပါတယ။် သတင်းစာမှာ လက်ထပ်ပြီးစီးခြင်း ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာ တစ်ခုရယ်။ မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၇၀၀တန် လက်ထပ်စာချုပ်ရယ်နဲ့ဘဲ နစ်ဦးသဘောတူ ယူခဲ့တဲ့ သူ က သဘောင်္သားဆိုတော့ကာ တစ်နစ်မှာ တစ်လ ဘဲ.နားဖြစ်ပါတယ။် ဒီလို နဲ့ နစ်ပေါင်း နဲနဲကြာလာ။ သူ လဲ သဘော်ပေါ်ကနေ ရှိုးပြောင်း ကိုယ့်ကို ခေါ်ချင်တဲ့ အရိပ်အယောင်ရှိပေမဲ့လဲ ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်သံယောဇဉ်ရယ်။ လေဖြတ်နေတဲ့ အဖေရဲ့သမီး ..ကို မသွားစေချင်ဘဲ သူ့အနားမှာရှိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒကို နားလည်လို့ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုဘဲနေခဲ့တယ။် ဒါပေမဲ့ဘွဲ့လွန်ဆက်မတက်ခဲ့မိဘူး. ဘွဲ့လွန်တက်ရင် နောက်ထပ် နစ် အနည်းငယ်ကို ထပ် ပေးဆပ်ဘို့ အ တွက် အာမမခံနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ။် ဒါဟာ မှန်ပေမဲ့လည်းမှားသွားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဘဲလား. ဝေမခွဲနိုင်ခဲ့ဘူး။ လုပ်စရာရှိတာတွေကို ငယ်စဉ်မှာ အပြတ်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကို မဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။နောင် ကိုယ် တောနယ်ပိုင်းမှာမှ တော်တော်လေးချောင်ကျတဲ့နေရာကိုပြောင်းရပြီဆိုတော့မှ အလုပ်သံယောဇဉ်က ပြတ်သွားခဲ့တော့တယ။် ကိုယ်မပြတ်ပေမဲ့လဲ သူက ဖြတ် သွားပေးခဲ့ပြီလေ။ အဖေအမေ လည်း မရှိတော့တဲ့ အချိ်န်မှာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ရွေးချယ်စရာမကျန်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ referencehttp://ywartharlay-ytu.blogspot.com/2009/07/blog-post_28.htmlPosted by khin oo may at 1:33 AM0comments Labels: kom
July 28, 2009 1:44 AM
future အနစ်နစ်ဆယ်တုံးက ရေးဘို့စဉ်းစားလို့မရတာဒါနဲ့ချေလိုက်ပါ။
အခုမှ ဘဲ အလုံးကြီးကျသွားတော့တယ။် ဟင်း.
July 28, 2009 1:45 AM
အစကတော့ အဖေနဲ့ အမေက နိုင်ငံခြား ထွက်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ သိပ်စိတ်မပါ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်တန်းတွေ တက်ရင်း သူများတွေ ဆီက ရောဂါ ကူးလာတယ်။ ကျောင်းဆက်တက်ရင် 4th year လောက် ရောက်မှ နောက်ထပ် ကျောင်း ၃ နှစ်လောက် ထပ်ပိတ်ရင် ဒုက္ခဆိုပြီး တွေးမိတာလည်း ပါပါတယ်။ ဒီပို့စ်ဖတ်ရင်း Brain Drain က Brain in the Drain ထက်စာရင် ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးကိုတော့ အမှတ်မထင် သတိရသွားတယ်။
ဆယ်တန်းအောင်တော့ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ ၃နှစ်အိမ်မှာ ထိုင်ပြီး ကျောင်းအဖွင့်ကိုစောင့်တယ်။ ၄လတက်ပြီး ပြန်ပိတ်သွားတော့ ဆရာဝန် အိပ်မက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကျောင်းတက်ဖို့ နိုင်ငံခြား ထွက်လာတယ် ဆေးပညာတော့ မသင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီ အချိန်ကစပြီး စိတ်လေတာ အခုထိပဲ။
July 28, 2009 3:11 AM
Post တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ဒီည မအိပ်တာ အကို့ကြောင့်။မနက်လာဖတ်ပါ။
ဘာကြောင့် နိုင်ငံခြား ထွက်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာကိုဖြေရရင် ကိုယ့်မိဘတွေအတွက်စဉ်းစားမိလို့ပေါ့....ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားထွက်လာခဲ့တာ မိမိအတွက် ကံကောင်းခြင်းလား ကံဆိုးခြင်းလား ဆိုတာကိုတော့အဖြေရှာတုန်းပါ....ရွာသားလေးရော ကံကောင်း ကံဆိုးဘယ်လိုယူဆပါသလဲ....mie nge
July 28, 2009 4:15 AM
ကိုရွာသား ဒီထက်မက ဆထက်တပိုး အောင်မြင်ပါစေ လို့ ရေခြားမြေခြား နိုင်ဂျံဂါးကနေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...းဝ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရနိုင်တဲ့ ပညာရေးကို မက်မောမိလို့ ထွက်လာခံတာပါ ကိုရွာသားရေ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာကတော့ ရုန်းကန်ခြင်းတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နပ်နေတာပေါ့
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်မိပါတယ်။ ဆယ်တန်းကို ကိုယ့်ထက်အရင်အောင်တဲ့ လူတွေထက် ကိုယ်တို့ Batch တွေမှာ နိုင်ငံခြားကို ထွက်တဲ့လူတွေ ပိုပိုများလာတာကို သတိစထားမိတဲ့ အချိန်တွေ... အခုဆို သိသမျှရွယ်တူတွေ အားလုံးနီးပါး အပြင်မှာချည်းပါပဲလေ။ “ဖေနားပြီဆို သားအလှည့်လေ” ဆိုတာကိုလည်း သဘောကျမိပါတယ်။ အားကျမိပါတယ်။ အဲဒီစကားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီး မြင်လိုက်လို့ပါ။
Yeah..exactly, like what ZT said, Brain Drain is absolutely better than Brain in the Drain. Cheers..
မနှစ်ကထက် စာရေးတာတွေ အများကြီးကောင်းလာတယ်ဆိုတာရယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခတ်တဲ့ ကျိမ်စာဆိုတာရယ် ၂ခုတွေ့သွားတယ်။ ကျန်တာတော့ ပြောချင်သေးဘူး။Brain ကို drain ထဲက ထုတ်လိုက်မယ့်အစား drain ကိုပဲ သန့်ရှင်းအောင် လုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ရွာသားလေးရေ့ အားတင်းထား။ တနေ့မှာတော့ တို့ရွှေပြည်ကြီးကို ပြန်နိုင်ရမယ်။
July 28, 2009 10:52 AM
အစ်ကို ဆက်ရေးမဲ့ စနေသား မှာ အဲဒီ အကြောင်းလေး ပါတယ် ညီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေအနေတွေကတော့ လာရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူပါတယ် ညိလေးရာ။ညိလေး ရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီ အမြန်ဆုံး ရောက်နိုင်ပါစေ။မေတ္တာဖြင့်
တူတူပါပဲ.... မိသားစု အတွက်ပေါ့...။ ရွေးချယ်စရာ... ဒီတစ်လမ်းထဲရှိတယ်... ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာ.. အိမ်ကိုပြန်ပို့ဖို့ မဆိုထားနဲ့ ...။ ကိုယ့်ဘာသာတောင် မလောက်ငှဘူး.... ပညာတွေ သင်ပေးခဲ့တာတွေကို အားနာလာပြီ.... ၊ ဒီကြားထဲ မိသားစု ကျမ်းမာရေး ကထ ဖောက်လာတယ်...။ လက်ထဲငွေ နဲနဲ ရှိတာက အဲ့ဒီ ကျမ်းမာရေးက ဖောက်လာတော့ ကြွေးပါ ပါလာတယ်.... ကဲ.... ဒီကိုမလာလို့ ဘယ်ကို သွားမလဲ... ?
No select No Copy လုပ်ထားတယ်လား။ လေးထောင့်တုံးတွေပဲ မြင်ရတယ်။ Copy paste လုပ်ပြီး ရုံးမှာ ဖတ်လို့ မရတော့ဘူး။ မန့်လို့ မရတော့ဘူး။ ကောင်းခန်း ရောက်မှနော်။
အခုမှဖတ်ဖြစ်တယ်. နောက်ကျနေပြီ. အိမ်လည်မထွက်ဖြစ်တာလေ..အလှူလိုက်ခံနေတယ် ထင်မှာစိုးလို့.. ဘယ်မှ မလည်. ဟတ်ဟတ်.း))အစ်မလည်း အလုံးကြီးကျခါနီးနေပြီ.း)ကိုယ်စခဲ့တဲ့ဇာတ် နိုင်အောင်ဆက်ကနေတာ. :D စိတ်ကြည်နူးပေမယ့် တခါတလေစိတ်ပင်ပန်းတယ်.း)အစ်မကတော့ နိုင်ငံခြားကို ဦးဥာဏ်ခေါ်လို့လိုက်လာတာပါ..ရေးစရာမရှိဘူးထင်ပါရဲ့..း)ဒီည တစ်ခုခုရေးမယ်လေ... မုဒ်သွင်းလိုက်ဦးမယ်. :Pရေးထားတာ ၃၊၄ ခု စိတ်မပါနေလို့ မတင်ဖြစ်တော့တာ. အသစ်တစ်ခုထပ်ရေးဦးမယ်.စိတ်ကူးပေါက်ရာပေါ့. သူများတွေလို စာရေးမကောင်းလေတော့စာရေးဘို့တော်တော်လေးစဉ်းစားနေရပါတယ်. :D
ကိုရွာသားရေ.....ဒီစားသားလေးကိုဖတ်လိုက်ရတော့သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ခပ်နာနာချတစ်ခုမျှသာပဲ ပြောခဲ့ပါရစေ...ဘ၀မှာ အကြွေးတွေထပ်နေလို့ဆပ်ဖို့အရေးက ရှိသေးပြန်တော့မဖြစ်မနေထွက်လာခဲ့ရလေ.....။
July 28, 2009 2:57 PM
ဒီကိုလာဖို့ငယ်ငယ်ကတည်းကအတွေးစိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး ၁၀တန်းအောင် သင်တန်းတက် တက္ကသိုလ်တက် ပြီးတော့အလုပ်လုပ် သွားစေချင်တာအမေပါ အမေကသွားစေချင်တာပါ အဲဒါကိုတောင်ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြနဲ့ရှောင်နေတာ နောက်ဆုံးအမေတော်တော်စိတ်တိုမှ ဒီကိုရောက်လာတာပါ ဒီမှာကအဖေကပထမတစ်ပတ်ကူညီပေးပါတယ် ကျန်တာတော့ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက်လျှောက်ပေါ့လေ ဘာပဲပြောပြောဒီရောက်တာ ၂နှစ်ပြည့်တော့မယ် ပျော်တယ်လည်းမဟုတ် မပျော်ဘူးလည်းမဟုတ် ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိပါဘူး
တကယ်ပြောရရင်တော့ ဓါတ်ပုံဆိုပြီးပြေးလာတာပါ။ နောက်ပို့စ်ဖတ်ပြီးကိုယ့်မှာစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်သွားတယ် ။ သစ်သစ်လာတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ နင်လာလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ သူတစ်ယောက်ကိုနင်နေသလို ငါလည်းလာပြီးလုပ်ကိုင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြချင်တာရယ် မြန်မာပြည်က ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကို ရင်မဆိုင်ချင်တော့တာရယ်ပါပဲ ကိုယ့်ရဲ့မာနက မိဘနဲ့ခွဲရခြင်းကို စတေးလိုက်ရတယ်။ ကျေနပ်ပါတယ် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ထိရောက်သွားခဲ့လို့ပါပဲ ။ ပြောခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုလူကြမ်းရေ..း) ။
HiI came Singapore to support my family and to give them better life in Myanmar.
ဘာကြောင့်လဲ နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ စားဝတ်နေရေးကြောင့်ပါပဲ။
ညီညီကတော့ နိုင်ငံခြားသွားရတာပျော်လို့.. လူမျိုးမတူ ဘာသာစကားမတူ အလေ့အထတွေမတူတဲ့နေရာတွေ သွားရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.. အဲလို နှစ်ချီပြီး မနေဖူးတော့ ဒုက္ခတွေတော့ သိပ်မသိပါဘူး.. အဟိ.. (ဓာတ်ပုံလေးကြိုက်တယ်..)
ပိုက်ဆံ ပိုရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တာက 50%။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာမှမတတ်နိုင်ပေမယ့် ကြိုက်နှစ်သက်မှုလဲ မရှိတဲ့ အခြေအနေကြီးထဲ မှာ မနေချင်တာက 50%။ အခုပျော်နေလားဆိုတော့ မပျော်ဘူး။ ပြန်မလားဆိုတော့လဲ အပြီးမပြန်ချင်ဘူး။ အလည်တော့ ခဏခဏပြန်ချင်တယ်။ ရွာကို မလွမ်းတဲ့ရက် တစ်ရက်မှမရှိဘူး။ မနက်ရုံးသွားဖို့ အမ်အာတီကိုလျှောက်ရင်းနဲ့တောင် ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်စကားစောင့်ရင်းရတတ်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်နံ့လေးကို လွမ်းတယ်။
သူလိုကိုယ်လိုပဲ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်တက် ပြီးတော့လည်း ဘာမှလုပ်စရာမရှိဟိုယောင် ဒီယောင် ယောင်ရင်း ယောင်ရင်း အခြေအနေပေးလို့ ရောက်လာတာပါ .. ဒုက္ခဆိုတာ သိပ်ကြီးကြီးမားမား မတွေ့ဘူးသည့်တိုင်အောင် နေရတာ မပျော်ဘူး .. ငြီးငွေ့တယ် .. တကယ်တမ်း ပြန်မလားဆိုတော့လည်း မပြန်နိုင်သေးပါဘူး .. ကိုယ့်မှာ လုပ်ဖို့ အခွင့် အရေး အခြေအနေ ပေးတုန်း လုပ်နိုင်တာတွေ လုပ်ရဦးမယ်လေ .. ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ မိဘကို ထောက်ပံ့နိုင်တော့ ဒီလိုပဲ မချစ်ပေမယ့် အောင့်နမ်းနေရတာပါပဲ .. :D
သီဟသစ် said... ဘ၀အတွက်အချစ်အတွက်ကိုယ့်အတ္တတွေ အတွက်လာခဲ့တယ်။ပျော်သရွေ့နေမယ် စိတ်ကူးတယ်ဗျာ..
ရွာသားလေးရေ ရေးလိုက်ပြီ ဒီမှာ
ပေရှည်လို့ မှားပါတယ်တော့ မအော်ကြေး
August 1, 2009 10:39 PM
Posted by Anonymous at 12:10 AM 36 comments Links to this post
ကျောင်းတွေ စတက်ရတဲ့ မိုးစိုစိုရာသီတစ်ခုမှာပေါ့။ ကျနော့အထင် ကျနော် ခုနှစ်တန်းနှစ်ဖြစ်မယ်။ မိုးတွေကလည်း ရွာ... ဇွန်ဇူလိုင်မှာ ရွာတဲ့မိုးစက်တွေနဲ့ အဖူးလေးတစ်ခု ကြွေခဲ့ရတယ်။ အခုဆို ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခါကျော်ပေမယ့် အဖူးလေးတွေ ကြွေနေတုန်းတဲ့လေ…………………
အဲ့ဒီနေ့ကို ဘယ်တော့မှ မေ့မရတော့လောက်အောင် အသည်းထဲမှာ အမာရွတ် စွဲထင်နေခဲ့တာ။ နေ့လည် သုံးနာရီတိတိမှာ တစ်ကျောင်းလုံး အလံတိုင်ရှေ့ ကွင်းပြင်မှာ မနက်ခင်းအလေးပြုသလို တန်းစီခဲ့ကြရတယ်။ အားလုံး တိုးတိတ်ငြိမ်သက်လို့။ အတန်းအလိုက် နှစ်ယောက်တွဲ တန်းစီလို့ ကျောင်းဝင်း ပြင်ပ မြေနီနီလမ်းဆီကို ဖြတ်လျှောက်ကြရတယ်။ အားလုံးထက် စိတ်စောနေတဲ့ ကျနော်က ခြေလှမ်းတွေ သွက်သွက်နေမိလို့ မနည်းပြန်ဆွဲထားရတာပေါ့။ မေနဲ့ အန်တီစုစုခင်တို့ ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင်နေတာပါ။
၄၀၀စကေး ကနေ ၄၅၀စကေး ကုန်းကိုကျော်ပြီးရင် ဆင်တူအိမ်ရာလေးတွေရှိတဲ့ ဆေးရောင်ပြာပြာ အိမ်လေးတွေကို မြင်ရပြီ။ သုံးလေးအိမ်ကျော်ရင် အန်တီစုတို့ အိမ်ရောက်ပြီ။ အိမ်ပြင်မှာ ကုလားဖျင်းတစ်ခုနဲ့ လူတွေအားလုံး ရုံးစုရုံးစုပေါ့။ ဌာနပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့ ကျောင်းကလူတွေ အိမ်အပြင်ဘက်မှာ အားလုံးစုကြတယ်။ ကြေကွဲမှုတွေကို ဖုံးဖိလို့မနိုင်ဘူး အံကြိတ်သူကြိတ်တယ်၊ တောက်ခေါက်သူ ခေါက်တယ်။ ဝေနေတဲ့ ယပ်တောင်ပေါ်ကိုကြည့်တော့
သုဿန်ကို ခြေကျင် အသော့နှင်ကြတယ်။ အခေါင်းဖွင့်မယ်တဲ့။ မကြောက်တဲ့သူတွေ အရှေ့တိုး တိုးပြီးကြည့်ကြတာပေါ့။
“ကြည့်ပါဦး အိပ်နေတဲ့အတိုင်းလေး... ဘိုမရုပ်ကလေး ကြနေတာပဲ”
“သမီးအငယ်ဆုံးလေ... တစ်ဦးတည်းသော သမီးတဲ့”
“မအေက ဆရာဝန်..... သမီးက အခုတော့ ရေတိမ်နစ်ရသတဲ့လေ”
မေ့ကိုရှာပေမယ့် လုံးဝမတွေ့ရဘူး။ မေက အန်တီစုအနားမှာ ရှိနေမှာ။ အန်တီစုကို မြင်ချင်လိုက်တာ။ အန်တီစုကို သနားနေမိတယ်။
စက်ရုံမိသားစု ကလေးတော်တော်များများမှာ အဲ့ဒီရောဂါ စဖြစ်တာပါ။ ဆရာတို့သမီးအငယ် သုံးနှစ်သမီး နွေးနွေးလေးလည်း အဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ မေ့ဆီကို အပြေးတစ်ပိုင်း ရောက်လာတော့ အန်တီစုဆီပဲ ပို့ပေးလိုက်ရတာလေ။ နွေးနွေးလေးခမျာလည်း သွေးတွေဆုတ်ကုန်တာမို့ ခြေထောက်က သွေးကြောတွေ ဖောက်ပြီး ဆေးကုခဲ့ရတာ။ သူ့ခမျာ အဲ့ဒီဒဏ်တွေကြောင့် အခုထိ ခြေနှစ်ဖက် ခွင်နေရှာတုန်းပေါ့။
ကလေး တော်တော်များများ အဖြစ်များတာမို့ အန်တီစုခမျာ ဆေးရုံမှာပဲ အနေများနေခဲ့တယ်။ အိမ်မှာတော့ မိန်းမဖော်တစ်ယောက်နဲ့ ကလေး လေးယောက်ကို စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့မိတာပါ။ ယောင်္ကျားလေးသုံးယောက်နဲ့ မိန်းကလေးက တစ်ယောက်တည်း ပြီးတော့ အငယ်ဆုံး။ အထွေးဆုံး သမီးလေးမို့ သူ့အဖေက အချစ်ဆုံးလေ။ အဖေလုပ်သူက နိုင်ငံခြားကိုသွားနေတာမို့ မိသားစုမှာ အန်တီစု တာဝန်တွေချည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရာသီချိန်မို့ ကလေးတွေ မဖိတ်မစင်ရအောင် စက်ရုံတစ်ခုလုံးမှာ အန်တီစု တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ဘယ်ကလေးမှ အသေအပျောက်မရှိခဲ့ဘူး။ အချိန်မှီသာ ဆေးရုံရောက်ခဲ့ ကျန်တာ အားလုံးအိုကေပြီလေ။
ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ ကျန်နေတဲ့ သမီးငယ်ကို မေ့သွားခဲ့တယ်။ အားလုံးကို ကာကွယ်ရင်း ရွှေသမင် မင်းကြီးတာက ထွက်သတဲ့လေ။ အန်နေတာလည်း မသိဘူး ဖျားနေတာလည်း မသိခဲ့ဘူး။ တကယ့်အချိန်ကျမှ အန်တီစုလက်ထဲကို သမီးရောက်လာတာ။ အများကို ကာကွယ်ရင်း ကိုယ့်ရင်သွေးအဖြစ်က မချိတင်ကဲစရာ။ မဖြစ်ထိုက်ဘူး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ သူရူးတစ်ယောက်လို ရေရွတ်ရင်းပါ။
ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားပေမယ့် သမီးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။
မိသားစုထဲက တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဘယ်တော့မှ အစားမထိုးနိုင်တော့ပြီလေ။
တိုင်းပြည်အတွက်ကော အနာဂါတ်ရဲ့ သားကောင်းသမီးကောင်းပေါ့။ ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီး။ မျိုးဆက်တွေဆိုတဲ့ စကားရဲ့ နောက်မှာ ဟောဒီရင်သွေးငယ်တွေ ပါပြီလေ။
အချိန်တန်မှ ပွင့်ကြမှာပါ။ ပွင့်သောပန်းတိုင်းလည်း လှမှာပါ။ အခုတော့ အဖူးဘ၀နဲ့ ကြွေရတယ်။ ပန်းပွင့်ဖို့တောင် အခွင့်မသာခဲ့။ လေတွေတိုက်လို့ မိုးတွေက ခြွေသတဲ့လား။ သဘာဝဆိုလည်း ကာကွယ်တားဆီးသင့်တယ် မဟုတ်လား။ တားဆီးလို့ရတယ်ဆို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ဘာလို့ လက်နှေးနေကြမလဲ။ အဖူးဘ၀နဲ့ မကြွေခင် အပင်ပေါ်မှာ ဝေအောင်ပွင့်ဖို့ ကျနော်တို့ မကြိုးစားကြတော့ဘူးလား…..
ငယ်တုန်းက အသည်းမှာထင်ဟပ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ နာမည်အရင်းအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီရင်နင့်ဖွယ် အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့ နောက် အခုတလော သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့် ကလေးတွေ ဆေးရုံတက်နေရပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းက ကျနော့ကို တပ်လှန့်နေပြန်တယ်။ ကျနော်တို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်တယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့တွေ ကြိုးစားပြီး လက်လှမ်းမှီသရွေ့ အဖူးတွေ မကြွေရအောင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းလေး စတင်ထားပါတယ်။ ကလေးတွေ သွေးလွန်တုပ်ကွေး မဖြစ်ရအောင် သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ ခြင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ ဦးတည်ထားပါတယ်။ အဓိက လုပ်ငန်းများအားလုံးကို Raven BDC က သွေးလှူရှင်လူငယ်တွေ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။
လောလောဆယ် မူလတန်းကျောင်းတွေမှာ စတင် အကောင်ထည်ဖော်နေပါပြီ။ စေတနာရှင် လူတစ်စုကောင်းမှုနဲ့ ကျနော်တို့ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့ ၂၀၀၉ မှာ အ.မ.က (၄) အလုံမှာ စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းက ဆင်မင်းလမ်း ဆင်မင်းရပ်ကွက် အလုံမြို့နယ်မှာ ရှိတာပါ။ ကျောင်းတွင်းနဲ့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်က ခြုံနွယ်တွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြို့နယ်ကျန်မာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကျောင်းဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာ ခြင်ဆေးမှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသား ဦးရေမှာ စုစုပေါင်း ၈၄ဦး ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသား ၃၄ဦး ကျောင်းသူ ၅၀ဦးပေါ့။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဦးထွန်းမြင့်အောင် ပါ။ ကျောင်းတစ်ကျောင်း မှသည် နောက်တစ်ကျောင်း၊ ကျောင်းငယ်မှသည် ကျောင်းကြီး၊ ရပ်ကွက်မှ မြို့ရွာ၊ မြို့ရွာမှသည် ကျနော်တို့ နိုင်သရွှေ့ လက်လှမ်းမှီသလောက် လုပ်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် ယခုလို တစ်နိုင်ကာကွယ်ရေးမှသည် ကျနော်တို့ ချစ်သောမြေမှ အနာဂါတ်အသီးအပွင့်များ အချိန်မတိုင်မှီ မကြွေလွင့်ကြစေရန် အားလုံးသောနိုင်ငံသားတိုင်းမှ အသိပညာအတတ်ပညာ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြစေလိုကြောင်း အသိပေးတိုက်တွန်းနိုးဆော် အပ်ပါသည်ခင်ဗျား....
Stop Dengue. Act Now! (ကို July Dream)
Posted by Anonymous at 12:30 PM 20 comments Links to this post
ဒီခရီးစဉျကို တမငျကို မရေးပဲ ခနျြလှပျခဲ့တာပါ။ ဒီခရီးစဉျက ကနြော့ကို နာကငျြစခေဲ့တယျ။ သူငယျခငျြးရေ ငါ ခံစားရသမြှတှေ ဒီအတိုငျးခရြေးလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါအဲ့ပငျလယျပွငျမှာပဲ ရေးခဲ့တာပါ။
ဒီတဈခေါကျကြောငျးခရီးစဉျက ငပလီတဲ့။ ကမျးခွကေိုတဈခါမှ မမွငျဖူးတဲ့ ကုနျးတှငျးသား အရိုငျးအစိုငျးလေး စိတျဝငျစားမှုအပွညျ့နဲ့ပါ။ ပထမနှဈတုနျးက ခြောငျးသာနဲ့ ငှဆေောငျအိပျမကျကို မကျခဲ့ဖူးတယျ။ အားလုံး အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီးမှ စီစဉျသူတှကေ ဖကျြပဈခဲ့တာလေ။ ကမျးခွနေဲ့ဝေးခဲ့တာပေါ့ဗြာ။ အခုငပလီဆိုတော့ တကျကွှမှုတှနေဲ့ အဆငျသငျ့ဖွဈနခေဲ့ပွီ။ လကျထဲမှာလညျး ဖပွေနျလာတုနျးက ပါလာတဲ့ ကငျမရာလေးနဲ့ဆိုတော့ ကမျးခွမှော အုနျးသီးတဈလုံးနဲ့ အလုံအလောကျကို ဖွဈနခေဲ့ပွီ။
ထုံးစံအတိုငျး အဲ့ဒီနှဈက မွို့ပွအငျဂငျြနီယာ မဂြောက ကမျးသာယာ ပွီးတော့ သူတို့ကားတှကေ အရငျထှကျခှာနှငျ့ကွပွီ။ ကြောငျးကွီးထဲမှာ အဖှဲ့လိုကျ အဖှဲ့လိုကျ ကားတှအေလာကို စောငျ့နကွေရတယျ။ ခရီးကို ရိုးထဲက သှားရမယျတဲ့ ကားလမျးကွမျးတယျဆိုတဲ့ အသိတှကေ ဒီခရီးကို နောကျမတှနျ့စခေဲ့ဘူး။ ငပလီရယျ မငျး စှဲဆောငျလှနျးတယျ။
လမျးခရီးမှာ သောကျဖို့ သောကျရသေနျ့တှကေို ကိုယျ့ကားပျေါကိုတငျပါဆိုတော့ ကနြျောတို့ကားပျေါက ကိုEC က တုပျတုပျမှ မလှုပျခဲ့ဘူး။ ရကေုသိုလျပါလဆေိုပွီး ပုခုံးထကျအရှဲခံသယျခဲ့တာပါပဲ။ ဘယျနှဈခေါကျမှနျးမသိခဲ့တော့။
ခရီးစဉျစပွီဆိုတော့ ပုဂံခရီးနဲ့ခွားနားမှုကို စတှရေ့ပွီ။ အားလုံးက တိတျဆိတျနကွေပွီ။ 98အငယျတနျးတှအေပွငျ ပွညျကြောငျး ဘကျက ဧညျ့သညျ ညီငယျညီမငယျတှလေညျး ပါတယျဆိုတာ နောကျအတျောကမြှ သိလိုကျရတယျ။ တရှရှေ့ကေ့ားနောကျမှာ ပါနတေဲ့ အရိပျတှကေ ဇလှနျပွညျတျောပွနျခရီးစဉျနှဈခုပါ။ ဒီခရီးနှဈခုကလညျး အသကျဝငျနခေဲ့တာ။ အားလုံးပေါငျး ကားငါးစီးထငျတယျ။ ကားအသေးလေးမှာ 95က စီနီယာ အဈကိုကွီးတှေ ဇကောထဲ ဇီးဖွူသီးထညျ့သလိုနကွေမှာ။
ရိုးထဲကိုဖွတျတော့မယျဆိုတော့ မိနျးကလေးတှေ အရှမှေ့ာ အပေါ့အပါးမလှယျတော့ပါတဲ့။ အငျး အဲ့အခြိနျကို ဖွတျကြျောရတာ သူတို့အတှကျ တျောတျောခကျခဲမယျ။ တောငျတှအေဆငျ့ဆငျ့ ကုနျးတှအေထပျထပျ။ ညဖကျမို့ထငျပါရဲ့ ခြောကျတှကေို မမွငျခဲ့မိဘူး။ မကွာပါဘူး ဆနျပွုတျတှေ စခကျြကွတော့တာ ပါပဲ။
နောကျနမေ့နကျမိုးလငျးတော့ မကျြနှာသဈရငျး အိမျသာနရောမှာ တနျးစီးနခေဲ့ပွီ။ ခရီးစဉျတဈလြှောကျလုံး ဒီဆိုငျက ပထမဆုံးမွငျရတာ။ ထမငျးကွျောကို မွနျမွနျစားရငျး ခရီးစဉျပွနျစဖို့ ဆျောသွနကွေပွီလေ။ ထူးထူးခွားခွားအကောငျလေးတဈကောငျကို တှခေဲ့သေးတယျ။ အနျတီကွီးလကျထဲကနေ မကွောကျမရှံ့ လကျပွောငျးယူပွီး ဓါတျပုံတှဲရိုကျဖွဈတယျ။ သူ့လကျကလေးတှကေ အရုပျလကျကလေးတှလေိုပဲ။ ဘာကွောငျ့မြား ဝကျဝံတှကေို ခဈြခငျမိမှနျးမသိခဲ့ဘူး။
ကားပျေါမှာ ညာဘကျနဲ့ဘယျဘကျအခွမျး ရုပျရှငျနာမညျ အပွိုငျဖှကျကွတယျ။ ဘယျဘကျက နိုငျမယျထငျခဲ့လဲ။ ညာဘကျအခွမျးကို ပါခငျြလှနျးလို့ အလယျတနျးကလူတှေ သနားပါတယျ။
ဟေး………ရှမှေ့ာပငျလယျတဲ့။ လှိုငျးခေါငျးဖွူတှမွေငျနရေပွီ။ ကားရဲ့ ညာဘကျအခွမျးမှာ ပငျလယျပွငျ ဖွဈသှားခဲ့တယျ။(ဘယျဘကျအခွမျးလို့ ကိုတောငျငူက ပွငျသှားပေးခဲ့ပါတယျ ကိုတောငျငူရေ ကြေးဇူးဗြာ အဲ့ဒီကိုရှာသားဟာလေ အခုအထိ ဘယျမှနျးညာမှနျးမသိသေးဘူး ထူပုံမြားတော့) ကမျးသာယာတဲ့။ ဂှဆိုတဲ့ မွို့လေးကို ပထဝီကနပေဲ ရငျးနှီးနခေဲ့တာ အခုမှပဲ တှထေိ့ရတော့တယျ။
မွို့ပွက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပငျလယျပွငျကို ဆငျးပွီးပှဖေ့ကျကွတယျ။ ဓါတျပုံတှတှေဲရိုကျရငျး လှိုငျးတှနေဲ့ စညျးခကျြညီနတေော့တာ။ ဟငျ့အငျး မငျးတို့ကို ကမျးသာယာမှာ မထားခဲ့နိုငျဘူးတဲ့။ ငပလီထိအရောကျပို့မှာမို့ မွို့ပွက အဖှဲ့တှနေဲ့ တှဲလကျတှဖွေုတျခဲ့ရတယျ။
နောကျထပျခရီးရှညျရှညျ တဈခုဖွတျရပွနျရော။ ငပလီရယျ ရောကျနိုငျခဲလိုကျတာ……
ခရီးတဈခုကို ညဖကျမှာ အစပွုပွီး မိုးလငျးရငျ ရောကျနကြေ ကိုယျ့အတှကျ ဒီခရီးက သိပျရှညျလြားတယျ။ နောကျတဈနေ့ တဈမနကျခငျးလုံး ကားပျေါမှာပဲ ရှိနခေဲ့တာ။ ဆော့ကစားခွငျးတှေ တိတျဆိတျပွနျတော့ အိပျစကျရုံပေါ့။ သီခငျြးတှေ ဘာတှမြေား စပျလာကွမလား ခေါငျးထောငျကွညျ့မိသေးတယျ။ တကျကွှသူဟာ ကိုယျတဈယောကျတညျးလား။ ငွိမျငွိမျမနနေိုငျတဲ့အဆုံး ကားပျေါက စပယျယာကို သီခငျြးတှေ မနားတမျးဖှငျ့ခိုငျးခဲ့တာပေါ့။
ငပလီကိုမရောကျခငျ ကားလမျးလေးက တဈမြိုးလေးခံစားရစတေယျ။ ရောကျတော့မယျဆိုတဲ့ အသိနဲ့လညျးဆိုငျမယျထငျပါရဲ့။
မကွာမတငျမှာ ငပလီကိုရောကျတော့ တညျးခိုဖို့နရော။ အားလုံးကိုစုစညျးတညျးခိုဖို့ စီစဉျထားခဲ့တယျဆိုပါတယျ။ နောကျကလြတေဲ့ ကနြျောတို့ကားမှာ ကနြျောတို့ ယောကငြ်ျားလေးတှေ အတှကျနရောမရှိခဲ့တော့ဘူး။ EC သူငယျခငျြးက စီစဉျပေးမယျဆိုတော့ အထုတျလေးတှဲ ဟိုဆှဲဒီဆှဲနဲ့ သူချေါရာနောကျပေါ့။ သူမြားတှေ ရထေဲဆငျးနပွေီ။ ပငျလယျပွာပွာနဲ့ ငှရေောငျသဲဖွူကို နငျးခငျြလှပွီ။ ဟိုးအဝေးးးးး အားလုံးနဲ့ဝေးတဲ့ အိမျကလေးတဈခုက အပျေါထပျမှာ ကနြျောတို့ကိုနရောပေးခဲ့တယျ။ အခနျးတဈခုထဲမှာ ပစ်စညျးတှစေုပုံခပြွီး ထမငျးစားဖို့ ပွေးကွရတော့တာပါပဲ။
မှနျမလေးထမငျးဆိုငျက ပုဂံကတိုးတိုးဝငျးလိုပဲ လူမြားတော့မနိုငျတော့ဘူးလေ။ ရမြေောကျသုတျ ပုဇှနျအစိမျးသုတျ ဂဏနျးဆိုတာတှမှောစားရငျး ဟငျးပှဲတှမေစောငျ့နိုငျတော့ ထုံးစံအတိုငျး မီးဖိုထဲဝငျ ဟိုဆှဲဒီဆှဲလုပျတော့တာ။
ညနမေတိုငျခငျရထေဲဆငျးတယျ။ ပငျလယျရကေ ငနျတယျ တကယျ။ လှိုငျးအပုတျမှာ နှာခေါငျးတှဝေငျသှားတဲ့ ပငျလယျရမှေနျးခွငျးက တဈမြိုးပါလား။ ဘောငျးဘီအိတျတှေ အပွငျထုတျပွီးခြိုးတော့ အိမျရှငျအဖိုးကွီး ကမေးတယျ မငျးကို ဘယျသူသငျပေးတာလဲတဲ့။ ဒီလိုပဲစိတျကူးရလို့ပါ။ သဲတှကေ ဘောငျးဘီထဲဝငျ လေးပွီးကြှတျကြ မခကျလားနျော။
နောကျနမေ့နကျ ကြောကျမောငျနှမသှားမယျတဲ့။ အားလုံး ၇နာရီမှာမနကျစာစားဖို့ပါ။ ညဖကျ အိပျတော့ ပစ်စညျးထညျ့မိတဲ့ အခနျးထဲမှာပဲ အားလုံး တနျးစီအိပျကွတယျ။ တဈလှညျ့စီအိပျမယျဆိုပွီး ပထမဆုံးနေ့ ကုတငျပျေါသုံးယောကျ အိပျတဲ့အထဲမှာ ကနြျောပါသှားတယျ။ နောကျနတှေ့လေညျး မလဲဖွဈကွတော့ဘူး။ ဗိုလျနမွေဲ ကြားနမွေဲပေါ့။ ဆောငျးတှငျး ပငျလယျက ခမျြးတာပါပဲလား။ မထခငျြ ထခငျြ ကွုံးရုံးထရတော့တာ။
ဖိနပျတှေ အမြိုးမြိုး ထညျ့လာတဲ့ သူငယျခငျြးက ဒီမနကျအတှကျ ဘာဖိနပျပေါ့။ အကြီ င်ျ အနီလေးဝတျမိခဲ့တယျ။ ပုံစံခငျြးတူနတေဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျကို အဲ့မနကျက ကောကျရလိုကျတယျ။ ဂပြနျရေ မှတျမိသေးလား။ ငါတို့ တှဲရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးရှိသေးလားမသိ။
ဓါတျပုံသရဲ သူငယျခငျြးတှေ ကွားမှာ “အလိုတျောကွပါ ဟိုကဆှဲ ဒီကဆှဲနဲ့ ခွတှေလေကျတှေ ပွုတျရခညျြရဲ့ ရှငျ” ဖွဈနတေော့တာပေါ့။ လကျတုနျတဲ့ သူငယျခငျြးကငျမရာဆရာကလညျး ပုံကောငျးတှေ အကုနျဖကျြခဲ့လရေဲ့။
ကြောကျမောငျနှမကလညျး လှတာပါပဲလား။ လှိုငျးတှအေပုတျ ကြောကျဆောငျတှပေျေါ ဝေးးးးးခနဲအျောရတာကို သညျးလှိုကျအူလှိုကျ။ လှိုငျးအပုတျကိုရိုကျပါဆို ငါ့ကိုဆှဲပါဟ ဟိုကြောကျဆောငျလေးလှတယျ ဒီနားရိုကျမယျ အုနျးပငျနဲ့ အုနျးပငျနဲ့ အဖှဲ့လိုကျရိုကျမယျ နဲ့ကို ကမျးခွကေို ဆူညံသှားစခေဲ့တယျ။
လဆေိပျကိုပို့ဦးမယျတဲ့။ နာမညျကြျော သံတှဲလဆေိပျပေါ့။ လဆေိပျရှေ့ မှာ အားလုံး ကားငါးစငျးနဲ့ ရိုကျဖွဈခဲ့တယျ။ အမွငျ့ကိုရှာရငျး ကားဘကျမှနျဘေးကို အပွေးအလှားသှားခဲ့ကွရတာမှတျမိသေးတယျ။ လဆေိပျဆိုပမေယျ့ မွို့ငယျက ဘူတာရုံလေးတဈခုလိုပါပဲ။
နခေ့ငျးနလေ့ညျ သူမြားတှနေားပမေယျ့ ကနြျောတို့ သီးသနျ့အဆောငျရှမှေ့ာတော့ ကလေးလူကွီးတှေ ဆော့နမွေဲ။ ထုပျဆီးတိုးမလား လကျဖွုတျတမျးဆော့မလား။ အဲ သခငြ်ျာကဧညျ့သညျတျော မမဝဝရော ဒီစာဖတျမိရငျ မှတျမိမယျထငျပါရဲ့။ သူငယျခငျြးမိနျးကလေးတှပေါ ကနြျောတို့ အဆောငျရှမှေ့ာ တဝုနျးဝုနျးနဲ့ပေါ့။ EC သူငယျခငျြးနှဈယောကျကတော့ သူ့ဇာတျသူနိုငျအောငျ ကနရှောမှာပါ။ သူတို့လညျးပြျောမှာပါပဲနော့။ ကနြျောတို့ အဆောငျဖကျကို ယောငျလို့တောငျ ခွဦေးလှညျ့ခဲ့ရဲ့လားမသိ။
အတူဆော့ခဲ့တဲ့သူတှေ အခုမြား အိမျထောငျရကျသား ကွလို့။ သူငယျခငျြးတို့မှာ ထုတျဆီးတိုးနတေုနျး မီမီ့ ကောငျလေး ရိုကျသှားတဲ့ ပုံလေးရှိသေးရငျ ထုတျကွညျ့ကွပါကှာ။ အလှမျးပွပေေါ့။
ပြျောခဲ့လားလို့မေးရငျ မပွနျခငျ နောကျဆုံးတဈညမတိုငျခငျအထိတော့ ပြျောမိပါရဲ့…………
ပုဂံခရီးစဉျကို အမှတျတရ ပွနျဖတျရငျး ဒီခရီးကို ရေးခငျြလာမိတယျ။ အငျးမိုငျတိုငျတဈခုဆိုတော့ အမှတျတရဖွဈပါစတေော့လေ…
Posted by Anonymous at 11:48 AM 17 comments Links to this post
လူတစ်ယောက်က သူ့ဘ၀မှာပျင်းရိငြီးငွေ့လှတယ်လို့ နေ့တိုင်း ညည်းညူသတဲ့။ သူ့ညည်းညူသံကိုကြားတော့ လူတစ်ချို့က စာချိုးတစ်ပုဒ်ကို ၀ိုင်းရေရွတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ မကြားသလိုကြားသလို သူမသိချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့တာပေါ့။
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ အိမ်ကလေးအနားမှာ သူဟာအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ သူဘာတွေလုပ်နေခဲ့တာလဲ။
မနက်တိုင်းစောစောထနေတတ်ခဲ့တယ်။ အိမ်လေးနားဝန်းကျင်မှာ သူဟာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်ပေါ့။ နေရောင်လာလို့ တော်တော်လေးပူမှ သူဟာ အိမ်လေးထဲကို ပြန်ဝင်သွားတော့တယ်။
ရက်ကလေးနည်းနည်းရတော့ မိုးအလင်းမှာ မြေပြင်က အညှောင့်ပြူစ အရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ကို မထိရက်မတို့ရက် စိုက်ကြည့်နေတာ တွေ့ကြရပါရောလား။ တိုက်လာတဲ့ လေပဲ ပြေးကာရ,မလို တက်လာတဲ့နေပဲ ဆွဲချရမလို ဟိုလှုပ်လှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေတာတော့ မျက်စိနောက်ကျတာပါပဲ။
အဲဒီရက်ကစလို့ သူ့အိမ်နားမှာ ပျင်းတယ်လို့ ညည်းညူသံမကြားတော့ဘူးဆိုပဲ။
နေထွက်မိုးချုပ် တကုပ်ကုပ်ကို အဲ့ဒီ အရွက်ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတော့တယ်။ လေတိုက်လို့ အရွက်ကလေးတွေလှုပ်ရင် သူ့ကိုတီးတိုးစကားဆိုတယ်ဆိုပြီး ကြည်နူးလို့။ သူအထင် သူ့ကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်လို့ တဖွဖွပြောနေသလိုပဲ။ တတ်လိုက်တာ ပျိုးရကျိုးနပ်ပဟဲ့ ဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ထီမထင် မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေတော့တာပေါ့။
တဖြည်းဖြည်းကြီးရင့်လာတော့ အရိပ်လေးတော့ ခိုရနိုးနိုး၊ အသီးလေးတော့ စားရနိုးနိုး၊ အရွက်ကလေးတော့ မြေသြဇာဖြစ်စေမယ် ရည်ရွယ်မိသတဲ့။
ဒါပေမယ့် ဗြုန်းဆို သစ်ပင်လေးရဲ့ ပိုင်ရှင် အသစ်ရောက်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီသစ်ပင်လေးကိုရဖို့ မျိုးစေ့တစ်ခုရှိရမယ်တဲ့။ အဲ့ဒီမျိုးစေ့က သူ့ရဲ့ သစ်ပင်ကြီးဆီက ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာ မျိုးစိတ်ခြင်းတူတာလည်း သူတို့နှစ်ပင်တည်းဖြစ်နေပြန်တယ်။
တစ်ယောက်တည်း လူမှာ ဘာပြောရမလဲ။ ချက်နဲ့လက်နဲ့ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ ဆိုတော့ ငြင်းခွင့်မသာတော့ဘူးတဲ့။ မျက်ရည်လည်ရွှဲလို့ တစိမ့်စိမ့်ရယ်ပျိုးခဲ့တဲ့ အပင်ကလည်း စိမ်းစိမ်းရယ် ကြည့်ပြန်ကော။ လက်ပြလို့ နှုတ်ဆက်လွယ်တယ်လေ တူရာတူရာမှာ ပျော်ရှာပေမပေါ့။
နောက်တစ်နေ့ကစလို့ အဲ့ဒီအိမ်လေးထဲက ဘာသံမှမကြားရတော့ဘူး။
တကယ်တော့ သူကတိုးတိုးတိတ်တိတ် ကျိန်စာတွေ ရွတ်နေခဲ့တာ။
သူရွတ်နေတဲ့ကျိန်စာက သူ့ကိုစာချိုးလေး ရွတ်ပြခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံး ကို။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို။
နီနေတဲ့ မြေတွေ ပတ်ကြားအက်လာခဲ့တယ်။ မိုးရွာတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မကြားရတော့ဘူး။
အဲ့ဒီအိမ် ၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာ ဘယ်တော့မှ သစ်ပင်စိုက်လို့ မရတော့ဘူး။
ပြီးတော့ ကြေကွဲစိတ်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းသမားကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ပေါက်တတ်ကရ အတွေးလေးကို ချရေးကြည့်တာပါ။
Posted by Anonymous at 6:00 PM 24 comments Links to this post
Rဇာနည်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ဆိုနေမိတယ်။
Posted by Anonymous at 1:52 PM6comments Links to this post
Posted by Anonymous at 10:28 AM9comments Links to this post
Posted by Anonymous at 5:10 PM 21 comments Links to this post
တခါတလေ ကြားရပါလိမ့်မယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြားက နီးလာလိုက် ဝေးလာလိုက် ခပ်ဖွဖွခြေသံတွေ။ တစ်ချက်တစ်ချက်လည်း ပွတ်တိုက်သွားမိမလိုလို။ ဒါပေမယ့် ငါတစ်ယောက်တည်းရယ်ပါလေ..
ဒီဧည့်ခန်းဆောင်မှာ ရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်တိုင် ဟန်တွေဝံ့ မာန်တွေတင့်ပြီး အခန့်သားလာ ထိုင်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေးလေးစားစား အသွင်နဲ့ ဒီနေရာမှာ လာချထားခဲ့တာ။ ငွေကြေးနဲ့ မဟုတ်ပေမယ့် ဧည့်ခန်းဆောင်မှာ ထားဖို့ တစ်ခုခုတော့ အားထုတ်ခဲ့ရမှာပါ။ ယုတ်စွအဆုံး လက်ကလေးတွေတော့ လှုပ်ရှားရမှာပေါ့။
ဒူးနေရာ ဒူး တော်နေရာတော် ဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဧည့်ခန်းဆောင်ထဲမှာ ငုတ်တုတ်မေ့ရမယ့် အရာထက် ဧည့်ခန်းဆောင်ထဲကို ၀င်ခွင့်မရတဲ့ အရာတစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် ဧည့်ခန်းဆောင်လှပရေးမှာ တံမြက်စည်းလေးဖြစ်ဖြစ် ခြေသုတ်ဖုံလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်မွှေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ချင်နေမိတယ်။
ဧည့်ခန်းဆောင်ထဲကို ၀င်ခွင့်မရခဲ့ရင်လည်း အကောင်းလေ။ တန်ရာတန်ရာပေါ့။ အဝေးက ဧည့်ခန်းလေးကို ငေးရင်း ဖြေသာနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
ဧည့်ခန်းဆောင် အသုံးချခံပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရင်လည်း ကျေနပ်မိမှာပါပဲ။ အနည်းဆုံး ကိုယ်ဟာ အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ ပြက္ခဒိန်ဆိုလည်း သူ့အရွက်တွေ ဆုတ်ဖြဲခံနေရရင်တောင် ကျေနပ်မိမှာပါပဲ။ သူ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ သူရှိတယ်လေ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့သူတွေ မြင်နိုင်သားလို့။ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ကြည့်မိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘယ်အချိန်ထိစောင့်ရမလဲ။
ပြီးတော့ ခန်းနားကြီးကျယ်တဲ့ ဧည့်ခန်းဆောင်ထဲမှာ တန်ရာတန်ဖိုး ကြီးတဲ့ အရာတွေကလည်း အဆောင်ဆောင်တခမ်းတနား။ ရွှေ ရွှေချင်းထပ်မြတ်၊ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြတွေ ရဲ့ကြားမှာ ကိုယ်က အနေစုတ်ပေမယ့် ရွှေထုပ်တဲ့ မြပုဝါရယ်လို့ ပြောရဆိုရအောင်လည်း မဟုတ်။ မရဲတရဲ ချောင်းကြည့်နေရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်မို့ ကိုယ်ဟာကိုယ် အားငယ်တယ်လည်းဆိုပါတော့။
တကယ်တမ်းက ဧည့်ခန်းဆောင်ထဲမှာ တင်ထားခံရတာ ကိုယ့်အတွက် စင်ပေါ်တင်ပြီး အလှောင်ခံရသလိုပါပဲ။ ဒေါင်းတွေအလယ်က ကျီးတစ်ကောင်လို ရှက်ရွှံ့မှုတွေနဲ့ပေါ့။ ဒေါင်းတွေ ပဲကြည့်နေကြဆို ဒေါင်းတွေနဲ့ပဲ ပြည့်စုံစေသင့်တယ်။ ကျီးတစ်ကောင်ကို ဟာသအဖြစ် တင်ထားခဲ့တာလား။ ကျီးဟာကျီးပါပဲ ဒေါင်းယောင်ဆောင်လို့မှ မဖြစ်နိုင်ပဲနော်။
တောင်းဆိုခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် တစ်ခုပဲအနူးအညွှတ် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဧည့်ခန်းဆောင်ထဲမှာ မနေရပါရစေနဲ့။ ချောင်ကွယ်မှာဖြစ်ဖြစ် မှောင်တယ်ပဲဆိုဆို ဒီဧည့်ခန်းဆောင်နဲ့ဝေးပါရစေ။
Posted by Anonymous at 4:07 PM 23 comments Links to this post
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့်ကြည့်တာပါ။ ပြေရာပြေကြောင်းဆိုပါတော့…………
Posted by Anonymous at 11:29 AM 10 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 1:13 AM 14 comments Links to this post
လူတိုင်း လူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အနံ့ဆိုတာ ရှိတတ်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မုန်းတီးတဲ့ အနံ့အသက် ဆိုတာလည်း ရှိတတ်ကြမှာပါလေ။
အဲ့ဒီကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ အနံ့တွေထက် မုန်းတီးမိတဲ့ အနံ့တစ်ခု ကို အခုအချိန်ထိ စွဲလမ်းမူးယစ် မိခဲ့တာကကော…………..
ပထမဆုံး အဲဒီအနံ့ကို မုန်းတီး သည်ထက် မုန်းတီးအောင် အစပြုခဲ့တဲ့သူက အဘွားလေးပါပဲ။ အဘွားလေးက ကြေးကွမ်းအစ်စုံကြီးရှေ့ချပြီး တစ်ယာပြီးတစ်ယာ စားနေခဲ့တာ ဆုံမညောင်းတဲ့အတိုင်း။ သူကြိုက်လို့သူစားတာပေမယ့် ကျနော်မကြိုက်တတ်ဘူးဆိုတာ သိတော့ လာစမ်းခလေးဆိုပြီး ကျနော့ကို ဖက်နမ်းရင်း ပါးစပ်ထဲကို အတင်းထည့် ကျနော်ကလည်း တစ်အားထွေးထုတ် မြေးအဘွားနှစ်ယောက် လုံးနေကြလေ။ သားမကြိုက်ပါဘူးဆို လို့ပြောလည်း ဟဲဟဲ ငါ့မြေးကလည်း စားကောင်းပါတယ် မွှေးတောင်မွှေးသေးနဲ့ အမြဲလုပ်နေကြ။ ကွမ်းစားနေကြမို့ သူ့ပါးစပ်ဟလိုက်ရင် ကွမ်းနံ့ကထောင်းကနဲလေ။ ခပ်ဝေးဝေးကနေ စကားပြောဖို့ ကျနော်အမြဲကြိုးစားနေကြ။ ဒါပေမယ့် မရပါဘူး ဘွားလေးက နားနည်းနည်းလေးတာမို့ ရှေ့တိုးရင်းတိုးရင်း ခန္တီစရတော့တာပေါ့။ အခုနေ ပြန်တွေးကြည့်တော့ အဲဒီတုန်းကများ ယဉ်ပါးခဲ့လေသလားလို့။
ကောင်မလေးကိုတွေ့တော့ ဖြူတူတူ လုံးတုံးတုံးလေးမို့ ချစ်စဖွယ် ထင်မိတယ်။ ကရင်မလေးလားလို့မေးတိုင်း ဟုတ်ပါဘူးရယ် ဖြေတတ်တယ်။ ပါးလေးဖောင်းနေတာလည်း တစ်မျိုးလေးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ နှုတ်ခမ်းလေးရဲတာလည်း အသားရယ်ဖြူတာကြောင့်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲခဲ့မိတယ်။
ကောင်မလေးလက်ကို ဆွဲတော့မှ လက်ထဲက ပလတ်စတစ်ထုပ်ကို တွေ့တော့တာကိုး။ လားလား ကောင်မလေးက ကွမ်းစားသူတစ်ယောက်ပဲကော။ အခုအချိန်မှ ကျနော်ဘာပြောရမလဲ။ ဒါဟာ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုမဟုတ်သလို ကျနော့အတွက် (ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်) ပြန်လည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုတာ သေချာနေခဲ့ပြီ။
ဒီတစ်ခါကော ကျနော် ခပ်ဝေးဝေးက နေဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါသလား….
ကောင်မလေး စကားပြောပြီဆို ကွမ်းတံတွေးလေးတွေက နှုတ်ခမ်းစွန်းထက်မှာ ရိပ်ရိပ်လေးစွန်းတတ်တယ်။ သူများတွေလို တပျစ်ပျစ်မထွေးတတ်တာကိုက ကျနော့အတွက်တစ်မျိုး။ အ၀တ်အစားတွေ မစွန်းတာပဲ တော်လှပြီလေ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်မို့ သူမကိုယ်တိုင်က တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။
အနားမရောက်ခင် အာမွှေးဆိုလား ဆစ်ဂနယ်ဆိုလား အနံ့တစ်ခုက အရင်ရောက်လာစမြဲ။ ဒါဆို နောက်လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး ကောင်မလေးလာနေပြီလေ။ ပြီးတော့ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ သမဆိုင်က ပစ္စည်းထုတ်သလို တွဲလျက်ပါလာတဲ့ အဲ့ဒီ ကွမ်းနံ့လေးတွေ။
ကောင်မလေးရယ် မတွေ့ခင်မစားပါနဲ့လားကွယ်ဆိုလည်း ဟင့်အင်း မနေနိုင်ဘူးတဲ့လေ။ တတ်နိုင်တာတော့ သွားလေးတွေ ဖွေးနေအောင် ပုံမှန်ဂရုစိုက်မယ်တဲ့။ ကောင်မလေးကတိတည်သား။ ကွမ်းချိုးတွေ မတက်အောင်တော့ ကြိုးစားရှာတယ်။
တစ်ခါသား ကွမ်းဖြတ်မယ်ဆိုတော့ ကျနော့မှာ ဖြူလေးပြာလေးခါအောင် ကွမ်းအစားထိုးတွေ City Mart ကနေ တပွေ့တပိုက်ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။ ပူရှိန်းက တစ်မျိုး ၊ ချိုချဉ်က တစ်ဖုံ၊ ငုံဆေးဆိုတာလည်း မကျန်။ တစ်ပတ်လား နှစ်ပတ်လားခံပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာ သွေးနီနီစွန်းပြန်ပါရော။
လူ့ဘ၀ဆိုတာလည်း ဆန်းကြယ်သား။ ကောင်မလေးလည်း ဖြူပါရဲ့။ ကွမ်းတံတွေးလည်း ရဲပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွမ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းကြောင့် တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အခုလည်း အဝေးတစ်နေရာစီကို ရောက်နေခဲ့ပြီ။ ကောင်မလေး ကွမ်းစားတုံးပဲ ထင်ပါရဲ့။ လွမ်းစရာတွေ ထောင်ချီအောင်ရှိပေမယ့် တကယ်မက်မက်စက်စက် လွမ်းနေမိတာက အဲ့ဒီ ကွမ်းနံ့။ ချိုမြခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က ကွမ်းနံ့တစ်ခုကို မူးယစ်စွာတမ်းတ နေမိတယ်တဲ့လေ။
ဖြစ်နိုင်ရင်………အင်းဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ ကွမ်းယာနံ့လေး ပြန်ရချင်မိတာ ရူးတယ်ပဲ ခေါ်မလား……
စနေနေ့က ကွမ်းစားတဲ့ ကွမ်းကြိုက်တဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ကိုမြင်ပြီး ဒီအတွေးစကိုရပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ကူးယဉ် ပေါက်တတ်ကရဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် သက်သက်ရယ်ပါ။
ပုံကကြိုက်လို့ထည့်လိုက်တာပါ။ သူများစုံတွဲပုံ ရိုက်ထားပါကြောင်း (ဝေဖန်ရေး ကြိုကန်ထားပါသည်ခင်ဗျာ)
Posted by Anonymous at 12:03 AM 36 comments Links to this post
Hope you can giveahand!
Dear Students and ex-students,
your help is needed foraMTech KE 20 student.
ISS will be placingadonation box in the exam hall from tonight till Saturday.
For DipSA students, pls goto level2outside Matilda's office to donate.
You may donate cash or cheque.
All collections will be passed onto her next-of-kin.
Charles PangProgramme Director, KE
Dear fellow ISS students
Sadly, one of our current Mtech KE 20 student Ms Sandar Phyo Wai has been diagnosed with colon cancer which has spread to her spinal cord and causing damage to2of the vertebrates. Currently, her right leg is paralyzed. Her prognosis is serious. She was admitted on Saturday to NUH and doctors are now deciding how best to treat her.
Yesterday, I met her cousin who expressed concerns about her missing the exams and the inevitable financial strain. Sandar is 28yrs old and haveacousin and brother in Singapore. Her parents have passed away. A group of us students are taking turns at the hospital to keep her company.
On behalf of her family, I am appealing to all staff & students to help her with the medical costs since the NUS medical insurance covers only the hospitilisation and not the more expensive surgery procedures. The estimated bill up to today is $35,000.
You can donate by sendingacheque payable to "Ms. Sandar Phyo Wai" and mail it to the ISS address.
Thank you for your concerns and generosity.
RegardsKyaw Htut Lin (KE 20)
On behalf of Sandar, thank you so much for all of your contribution.
This is the latest condition of Sandar.
(1) Cancer cells are spread already to liver and rectal colon.
(2) Back Bone operation was not completely removed all tumors.
(3) So, now Doctors decided to cure by two ways, radiotherapy and chemotherapy.
(4) For Radiotherapy, the estimated cost is S$7000.
(5) For chemotherapy, there are two options. First option, Singapore Cancer Research team ask Sandar to test her cancer cells for their experiment. If that meets their experiments, they will sponsor for chemotherapy. If not, Sandar will do that by herself.
(6)For implant of back bone, it costs over S$15000.All other charges for hospital fees , operation fees and consultation fees are S$ 38000 till now.( We got medical insurance S$30000)
May Thet Zan
P.s : Now we are collecting donation by Sandar's Own Account. (403-15405-9 POSB saving A/C, Sandar Phyo Wai)
Please share this information to other friends.
Posted by Anonymous at 5:33 PM7comments Links to this post
ရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀န်ခံချက် နဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အဆုံးသတ်
ကိုဖိုးသင်္ကြန်ရေ တဖွဖွခိုင်းလွန်းလို့ ရေးတော့ရေးလိုက်ပြီဗျ။ ကျနော်က အရေးလည်းမတတ် ဂီတကိုလည်း နားမလည်ပါးမလည် အကယ်၍ တစ်ခုခုများအမှားအယွင်းဖြစ်ပြီး လွဲချော်သွားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ…..
၀ုန်းခနဲ အသံက တံခါးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ။ ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်။
နောက်တော့ ရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀န်ခံချက်တွေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို စတင်မြင်တွေ့ရပါတော့တယ်။
သူ့ဘ၀က ဒီဂီတတွေနဲ့ ယဉ်ပါးဖို့ ခဲယဉ်းပေစွ။ သူ့အဖေရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေက အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဲ့။ သူကတော့ သူဘ၀က ဂီတဖြစ်ရမယ်တဲ့။ သူဘာကိုပဲပေးဆပ်ရ ပေးဆပ်ရ။ ယုတ်စွအဆုံး ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တာသာ ကြည့်ပါတော့။
ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့သလား (တကယ်ဆို ဒီဆုမျိုးမပြည့်သင့်ဘူးလေ) သူ့ကို ဂီတဖက်မလိုက်စေချင်တဲ့ အဖေ ရုတ်တရက်သေဆုံးရာကအစ သူဂီတ နယ်ကို ခြေစုံပစ်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။
မိုးဇက်ကို စတွေ့တော့ တကယ့်ကို စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ ဒါမိုးဇက်ပါလို့ ဘုရားစူးပြောရလောက်အောင်အထိ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ထွေးလား လုံးလားနဲ့။ မြင်ရတဲ့ပုံစံကို သူ့ရဲ့ ဂီတနဲ့ လုံးဝအပ်စပ်လို့ကို မရခဲ့ဘူး။
မိုးဇက်ရဲ့ ပါရမီကို မြင်ရတာကတော့ March of welcome ကနေ အစပြုခဲ့တာပါ။ သူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ သီချင်းကို မိုးဇက်က နားထောင်ရုံမျှနဲ့ တစ်ပုဒ်လုံး ပြန်လည်တီးပြခဲ့ရုံမက အတီးအသော့လေးတွေနဲ့အပြင် ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ပါလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာမို့ သူကိုယ်တိုင် တုန်လှုပ်ခဲ့ရတာပါ။
ဂီတတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သူသိပ်ချစ်တဲ့ လက်ဖျားနဲ့တောင်မထိရက်ခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကိုလည်း မိုးဇက်က ရရှိသွားခဲ့ပြန်တယ်။ ဘုရားသခင်ရက်စက်လွန်းလှတယ်။
မိုးဇက်ရေးတဲ့ ပြဇာတ်တွေ မိုးဇက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ…ဒါတွေအားလုံးက သူ့ကိုလှောင်ပြောင်နေသလိုပဲ။ ဂီတက သူ့ဘ၀ ဒီဂီတအတွက် အရာအားလုံးကို သူစွန့်လွှတ်ဖို့အဆင်သင့်လေ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာပါရမီမပါခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်။ သူအောင်မြင်သင့်သလောက် အောင်မြင်ပါရဲ့။ မိုးဇက်လောက်လူသိမများခဲ့ဘူး။ အခုသူ ၀န်ခံချက်ပြောနေတဲ့ တရားဟောဆရာတောင် သူ့သီချင်းကိုမသိဘူးတဲ့လေ။
အောင်မြင်မှုကို မက်မောတဲ့လူထဲက လူတစ်ယောက်၊ ပြီးတော့ ဂီတကိုအရူးအမူးဖက်တွယ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက် မိုးဇက်ဟာ တကယ့်ကို နတ်ဆိုးတစ်ကောင် မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ပါပဲ။
သူကိုယ်တိုင်ပဲ မမျှတတဲ့ ကောင်းချီးပေးခဲ့သူ ဘုရားသခင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ မိုးဇက်ပျက်စီးဖို့အရေး သူကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခါးသီးတဲ့မုန်းတီးမှုတွေနဲ့ အရာရာကို စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ အမုန်းတွေ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမုန်းတွေပေါ့။ ဒါတွေကို မိုးဇက်မသိခဲ့ဘူးလေ။
မိုးဇက်ရဲ့ တက်လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ ခဲ့တာမို့ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုတွေနဲ့ အကြပ်ရိုက်စေခဲ့တယ်။ မတရားသော ယှဉ်ပြိုင်မှုနဲ့ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ကြိတ် အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာ။
မိုးဇက်ကို ထိခိုက်ကြေကွဲပြီး ဘ၀ပျက်စေခဲ့တာ သူ့အဖေသေတဲ့ အချိန်ကစမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင် မိုးဇက်အဖေ၀တ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ဖျက်ဝတ်စုံနဲ့ မိုးဇက်ကို requiem mass ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးစေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းနဲ့ မိုးဇက် ကိုထိုးနှက်ခဲ့တာ။ ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့ မိုးဇက်ကို ဒီသီချင်းရေးဖို့ ငွေကြေးတွေနဲ့မြူဆွယ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ မိုးဇက်ကို အကြိမ်ကြိမ်တိုင် ခြောက်လှန့်သွေးပျက်စေခဲ့တာပါ။
တကယ်တမ်းတော့ မိုးဇက်ကို သူသတ်ခဲ့တာ။ သူမှားသွားခဲ့ပြီ။ ရလိုက်တဲ့နောင်တ ကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေပြီး အပြစ်ကနေ ခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတဲ့လေ…
ရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀န်ခံခြင်းကတော့ မိုးဇက်ကို သူသတ်ခဲ့တာပါတဲ့။ သူရယ် ဘုရားသခင်ရယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့….
အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ နောက်ကို လူတိုင်းလိုက်နေမယ်ထင်တယ်။ ငွေကြေးလိုမက်မောတပ်မက်စေတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ တစ်ချို့က ရိုးသားကြိုးစားပြီးအောင်မြင်တယ်။ တစ်ချို့က ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့အောင်မြင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်ပါတယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပေမယ့် မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ လိပ်ပြာသန့်ရဲ့လား ဆိုတာကိုကော တွေးစေချင်မိတယ်။ ကိုယ့်အတွက် သူတစ်ပါးကို စတေးရမယ်။ အထူးသဖြင့် ဘ၀တွေ အသက်တွေ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ အရာတွေ(သူတစ်ပါး မို့ ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပါ) စတေးရမယ်ဆိုရင်ကော အောင်မြင်ချင်သေးပါသလား။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါလေ။ ခံယူချက်ခြင်းမှ မတူနိုင်ပဲ။
နောက်တစ်ခုကတော့ အောင်မြင်မှုတွေ တစ်သီကြီးနဲ့ မိုးဇက်ရဲ့ ဘ၀ပါ…
ပါရမီကြောင့် လက်ချောင်းတွေ လှုပ်လိုက်တိုင်း လက်ခုပ်သံတွေ ဘ၀ဂ်ညံစေခဲ့တယ်။ သူအမြဲရွတ်တဲ့ စကားလိုပဲ ဒီမှာ လူတွေက သူ့ကိုချစ်ကြပါတယ်တဲ့လေ။ တကယ်တော့ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မူးယစ်မနေသင့်ဘူးနော်။
တစ်ချိန်လုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူ့ဘ၀ နေ၀င်ချိန်ကတော့ သံဝေဂရစရာတွေနဲ့ပေါ့။ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့် မာနတွေချခဲ့ရတာတွေ။ အနုပညာကို ဟင်းရွက်ကန်းစွန်းလိုရောင်းခဲ့ရတာတွေ။ ဘယ်လောက်အသည်းနာလိုက်မလဲ။
အဆိုးဆုံးကတော့ သူရေးခဲ့တဲ့ ဆင်ဖိုနီတွေ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပေမယ့် မိုးဇက်တစ်ယောက် ဘယ်နားပျောက်မှန်းမသိအောင်ကို ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာ။ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့အုတ်ဂူသွင်းမထားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အများသူငှာနဲ့ ရောနှောပြီး mass grave မှာ မြုပ်နှံခံခဲ့ရတယ်။
ထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ သူသေပေမယ့် သူ့သီချင်းတွေ မသေခဲ့ဘူး။ သူ့နာမည်မသေခဲ့ဘူးလေ။ ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်ဖူးထင်ပါရဲ့။
ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် sound box ကိုတော့ ဖွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ အတီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက စွဲဆောင်မှုအပြည့်။ သူတို့ခေတ်ရဲ့ ပြဇာတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း တစေ့တစောင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဆုံးသတ်မှာတော့ သူသိပ်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ မိုးဇက်ရဲ့ ရယ်သံဆန်းဆန်းကို မမေ့တော့ဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ်……
သူဆိုတာကတော့ Antonio Salieri ပါ........(အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ နာမည်မှားရေးထားပါတယ် :P)
Posted by Anonymous at 12:31 AM 14 comments Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်က မြနှင်းဆီကို ကျနော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လီဆာကိုတော့ တနေ့ကမှ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ လီဆာကိုမြင်မြင်ချင်း မြနှင်းဆီကို ပြေးမြင်မိတယ်။ တကယ်တော့ မြနှင်းဆီဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကျနော်မုန်းတီးခဲ့တာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီပဲ။ လီဆာကိုကော…..
မြနှင်းဆီကိုဘယ်လောက်မုန်းလဲဆို အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမ၀ယ်ပဲ တမင်ချန်ထားခဲ့တာ။ စာအုပ်သွားဝယ်တိုင်း သူ့ကိုတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မုန်းတီးမှုနဲ့ တစ်ဖက်လှည့်မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တာချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုရုပ်ဆိုးက ကျနော့စာအုပ်စာရင်းမှာ မပါတာမို့ မြနှင်းဆီကို ကျနော့ဆီ ပို့ခဲ့ပါတယ်။ မုန်းတီးစွာနဲ့ပဲ မြနှင်းဆီကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မိပြန်ရော။
လီဆာကိုတော့ ရုံးက စီနီယာက ရုံမတင်ခင်မှာ ကြည့်ဖို့ပေးခဲ့တယ်။ သူပြောတာက သီချင်းတွေသိပ်ကောင်းတာပဲတဲ့။ ဟုတ်တယ် သီချင်းတွေသိပ်ကောင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လီဆာကလည်း မုန်းတီးဖို့ကောင်းပြန်ပါရောလား။
မြတ်စုနဲ့ဖြူလေးကြားမှာ မြနှင်းဆီမရှိခဲ့ရင်ကောင်းမှာလို့ အကြိမ်ကြိမ်ရေရွတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီမိန်းမကြီးကြောင့်ဆိုပြီး လက်ညိုးထိုးစွပ်စွဲချင်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြနှင်းဆီကို ဆွဲထုတ်ပစ်ချင်ခဲ့တာ။ သိပ်လှသလောက်မာယာများတဲ့ မိန်းမ။ ရှေ့အကြောင်းတွေသာမသိခဲ့ရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် သူ့ကိုသနားနေမိမှာ။
သာယာလှပတဲ့ ဒဲရစ်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ပါပဲ။ သားကလေးမွေးတဲ့ အထိ တနင်္လာနေ့တိုင်း ချစ်ဇနီးဆီကို ပန်းတွေပို့တတ်တယ်။ အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘယ်လောက်သာယာ ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀လေးလဲ။ ကျနော်လည်း အဲ့လိုဘ၀မျိုးပိုင်ဆိုင်ချင်ပါတယ်။ လီဆာဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် မပေါ်ပေါက်ခင်အထိပေါ့။
မြနှင်းဆီက ပျော့ညံ့တဲ့ မြတ်စုဆိုတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို မြူဆွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြတ်စုကို လက်ခုတ်ထဲကရေဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ လူပျိုလူလွတ်မြတ်စုတစ်ယောက် မြနှင်းဆီရဲ့ သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုအောက်မှာ ကျရှုံးခဲ့ရတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ ချစ်သူဖြူလေး နဲ့ ဝေးခဲ့ရတာပေါ့။
လီဆာက ဒဲရစ်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်။ မရရအောင် ယူမယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားခဲ့တာ။ ခရစ်စမတ်ညစာစားပွဲမှာ သူ့ကိုငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ ဒဲရစ်ကို အငြိုးနဲ့ပါ။ ဒဲရစ်နောက်က မိသားစုဆိုတာကို မထည့်တွက်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး မိသားစုကိုပါ လိုက်နှောင့်ယှက် ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အထိ။
မြနှင်းဆီနဲ့လီဆာ နှစ်ယောက်စလုံး ပိုင်ဆိုင်တာက ရူးသွပ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါပဲ။ သန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အရောင်စွန်းအောင်လုပ်ပစ်ခဲ့ကြတာ။ အဆုံးစွန်တဲ့ မှားယွင်းမှုတွေနဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ ချစ်ခြင်းကို ရအောင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာ။ မိမိကြောင့် သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်ပါစေလို့ ရည်ရွယ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို အသက်သေခံသည်အထိ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုမှတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကကော ဘာများပါလိမ့်။ မိမိချစ်တဲ့သူ ဒုက္ခရောက်မယ့် အရေးလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ပါသလား။
မိန်းကလေးတွေကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေအပြင် ယောင်္ကျားလေးတွေကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေမရှိသင့်ဘူးလား တွေးနေမိတယ်။ ယောင်္ကျားရင့်မာကြီး တန်ပဲလို့ မပြောပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော်တို့မှာလည်း ကျနော်တို့ အားနည်းချက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်ကို ချက်ပိုင်ပိုင် အသုံးချတတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ယောက်ကြောင့် ဘ၀တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဘ၀တစ်ခုနောက်က ဘ၀များစွာ ပျက်စီးသွားရမယ်ဆိုရင်ကောဗျာ။
နောက်ဆုံး ကျနော်ရလိုက်တာကတော့ အစွန်းရောက် ၀ါဒတွေရဲ့ မကောင်းကျိုးပါပဲ။ ဘယ်အရာမဆို တစ်ဖက်စွန်းရောက်သွားရင် မကောင်းမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘုရားဟော အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုပဲ လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ကျနော့စာရင်းမှာတော့ မြနှင်းဆီနဲ့ လီဆာဆိုပြီး တိုးသွားတာပေါ့ဗျာ….
Posted by Anonymous at 12:02 AM Links to this post
Posted by Anonymous at 7:29 PM Links to this post
စက်တင်ဘာလရဲ့ အိုက်စက်တဲ့ ညတစ်ညမှာ သူ့ကိုကျနော်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ပူလောင်နေတဲ့ အိမ်ရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ကျနော်ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ တကယ်ပါ အငမ်းမရ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမိတာကိုး။ သူ့ကိုနာမည်သာ ကြားဖူးခဲ့တာ တစ်ခါမှ မဆုံဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ ရင်ဆိုင်အတွေ့မှာ ဖင်ထိုင်မေ့ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့….
အစောပိုင်းက ပို့စ်တွေမှာ ရေးခဲ့သလို woodland အိမ်ကိုပြောင်းရခြင်း အဓိကအချက်က စာအုပ်စင်။ စာအုပ်စင်ထဲက စာအုပ်တွေထဲမှာ ခင်ခင်ထူးရဲ့ အညာသူအညာသားဆွေမျိုးများ၊ နုနုရည်အင်းဝ ၂၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်း၊ အဏ္ဏ၀ါစိုးမိုးရဲ့ ပင်လယ်ပျော်တွေအကြောင်း စတာတွေကို ဒီစာအုပ်စင်က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေပါ။
သူ့ကိုလည်း အဲ့ဒီအောက်ဖက်ချောင်လေးထဲက ရှာတွေ့ခဲ့တာ။ ပြီးတော့ သူက clone လေးတစ်ယောက်ပဲ။ စိမ်းဝါရောင်လေးထဲမှာ သူ့ပုံလေးက အတိုင်းသား ထင်းလို့။ သူ့အကြောင်းကို ကျနော်သိခဲ့တာ နည်းနည်းလေးပဲ။ သိတယ်ဆိုရုံလောက်လေးပဲ။ ညံ့လိုက်တာများဗျာ။ တကယ်ဆို ဒီ့ထက်ပိုပြီး သိသင့်တယ်။ မြင်ဖူးတယ်ဆိုတာလည်း အိမ်အပေါ်ထပ် ထုပ်တန်းမှာ ခန့်ခန့်ကြီး ချိတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ခုထက်မပို။
ကျနော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကျနော်မသိသော သူ့အကြောင်းကတော့…
မိုးတွင်း ဆောင်းတွင်းဟု ခေါ်ကြသော်လည်း နွေရာသီကို အဘယ့်ကြောင့် နွေတွင်းဟု မခေါ်ကြသလဲ၊ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲရှိသော်လည်း ဘာကြောင့် လင်မယားတစ်ဝမ်းကွဲမရှိသလဲ စသည့်မေးခွန်းများကို ငယ်ဘ၀ထဲက စဉ်းစားတွေးတော မေးမြန်းတတ်သည်။
အတန်းတိုင်းတွင် ပထမရရှိခဲ့သူတစ်ဦး။ စကောလားရှစ်အပြင် ဦးရွှေခိုဆုကိုလည်း ချီးမြှင့်ခံရခဲ့သည်မှာ ထူးချွန်ထက်မြက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းသိသာထင်ရှားနေပါသည်။ ဘီအယ်လ် (ဥပဒေပညာ) ပထမနှစ်တွင် ကျောင်းသားကိစ္စ နိုင်ငံရေးကိစ္စ အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်နေသဖြင့် ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် စာမေးပွဲကျရှုံးဖူးခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ်ပါလီမန်မှ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ၏ မိန့်ခွန်းများကို အလွတ်ရသည်အထိ လေးနှစ်အတွင်း ဖတ်ပြီး မှတ်သားထားနိုင်သည်။ ထို့နောက်ထိရောက်စွာ အသုံးချခဲ့သည်။
အစားအစာ မစားပဲ နေနိုင်သည်၊ ဖြစ်သလိုနေထိုင်တတ်သည်၊ စောဒကတက်ခြင်း အလျဉ်းမရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူမတူအောင် ခြိုးခြံချွေတာပြီး သည်းခံနိုင်စွမ်းကြီးသူဖြစ်ပါသည်။
ပန်းတိုင်အတွက် အသက်ပေးထားပြီး ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သတ္တိအပြည့်ဖြင့် ရဲဝံ့စွာ တိုက်ပွဲဝင်သူတစ်ဦးအသေအချာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘီအိုင်အေ အုပ်ချုပ်မှုလွှဲပြောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗိုလ်မိုးကြိုးနှင့် အချေအတင်စကားပြောကြရာ ဗိုလ်မိုးကြိုး ကဓါးကိုဆွဲလျှင် သူကလည်း ဓါးရိုးကိုင်၍ အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း သတ္တိပြောင်ခဲ့ခြင်း။ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွင် သရက်ခရိုင်မင်းတုန်းနယ်တွင် ရှေ့တန်းတက်၍ မကြောက်မရွံ့ စီမံခန့်ခွဲခဲ့ခြင်း။
၆။ လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစည်းရုံးနိုင်သော သံတမန်ကောင်းဖြစ်ခြင်း
ထူးခြားသော အရည်အချင်းတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကရင်-ဗမာ၊ ကချင်-ဗမာ၊ ရှမ်းတောင်တန်း-ဗမာ ဆက်ဆံရေးအတွက် တကယ့် တံတားကြီးတစ်စင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ထပ် သူလိုလူ တစ်ယောက် မရှိနိုင်တော့ပါ။
ဘုရင်ခံက လိုချင်သောရာထူးပေးပါမည်ဆိုသည်ကိုတောင် ပန်းတိုင်ကိုမြဲမြဲစွဲကိုင်လျက် ငြင်းပယ်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
အရာရာကိုပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ “ယခုလို ကျွန်တော်အကြံပေးတာကိုမှ သဘောမတူပဲ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာ နေချင်သေးတယ်၊ သူတို့ပြုသမျှဘဲ ခံချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သဘောအတိုင်းဘဲ။ သို့သော်နောင်ကို ကျွန်တော်တို့အဆိုးမဆိုပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့က နယ်ချဲ့သမားများကို အပြင်းအထန်ချရတော့မှာ ဖြစ်လို့ နယ်ချဲ့သမားနဲ့ပူးနေတဲ့ လူများကိုလည်း ချမှာဘဲ” စသဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးနိုင်သူတစ်ဦးပင်။
“ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူလူတွေဟာ နောက်လိုက် လူတွေထက် ပိုပြီး အမြင်ကျယ်ရမယ်။ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဟိုလူပြောဟုတ်နိုးနိုး၊ ဒီလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး၊ ယောင်ချာချာလုပ်နေရင် ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဖူး။ ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူဟာ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ကိစ္စကို တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ပြောရဲရမယ်၊ ရှင်းပြနိုင်ရမယ်၊ အသက်စွန့်သင့်တဲ့ နေရာမှာ စွန့်ရဲရမယ်။ ပရိယာယ်သုံးသင့်တဲ့နေရာမှာ သုံးရမယ်။ အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီးလုပ်ရမယ်။ အများယောင်လို့ ယောင်ရတယ် အမောင်တောင်မှန်းမြောက်မှန်း မသိဆိုရင် ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဖူး။”
အထက်ပါမိန့်ခွန်းကိုကြည့်ရင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ စီစစ်စရာလိုမယ်မထင်။
စသည်စသည်ဖြင့် သူ့ကိုကျနော်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ သူ့အကြောင်းကိုသိလျင်သိခြင်း ကြက်သီးမွေးညှင်းထသည်အထိ တုန်လှုပ်မိသည်။ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမြင်ယောင်သည်။ လက်တွေ့များ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးလျှင် မည်မျှနေမည်မသိ။
သူသည် ကျနော်တို့အတွက် မီးရှူးတန်ဆောင်တစ်ခုပင်။ ဟုန်းခနဲတောက်သော ကောက်ရိုးမီးများလို မဟုတ်။
ထာဝရလင်းနေသည်။ အမြဲလင်းနေသည်။ ထိန်ထိန်ညီးလင်းနေသည်။
ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်၍ ယနေ့တိုင်လင်းလျက် ထာဝစဉ်လင်းနေမည့် မီးရှူးတိုင်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
ကိုးကား - အောင်သန်း၏ အောင်ဆန်း
Posted by Anonymous at 12:05 AM 24 comments Links to this post
ရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀န်ခံချက် နဲ့ လူတစ်ယောက်ရ့...